Maraykanka : “Awood baan u adeegsan doonaa arrinta Kuuriyada Waqooyi” – Balcad.com Teyteyleey
Maraykanka : “Awood baan u adeegsan doonaa arrinta Kuuriyada Waqooyi”
Safiirka Mareykanka u fadhiya Qaramada Midoobey Nikki Haley ayaa shirka deg degga ah ee gollaha ammaanka ee Qaramada Midoobey ka sheegtay in tijaabadaasi Woqooyiga Kuuriya ay tijaabisay hubka riddada dheer ee isaga kala goosha qaaradaha ay ka dhigan tahay daandaansi militari.
Haley ayaa ku hanjabtay in Mareykanka uu xayiraado dhanka ganacsiga ah saari doono waddamada ganacsiga la leh Kuuriyada Woqooyi.
Waxay sheegtay in haatan loo baahan yahay in dalkaasi laga qaado tallaabooyin dheeraad ah maadaama ay miro dhal noqon waayeen xayiraadihii caalamiga ahaa ee muddo saarnaa Kuuriyada Woqooyi.
Dhinaca kale, dhiggeeda Shiinaha u fadhiya Qaramada Midoobey ayaa sheegay in dalkiisu uu tallaabada Kuuriyada Woqooyi u arko mid aan loo dul qaadan karin basle waxa uu ku baaqay in xiisadda la dejiyo oo la wada hadlo.
Waxaa uu ku celiyay baaqa horey ay wada jir u soo jeediyeen waddamada Shiinaha iyo Ruushka oo ahaa in Mareykanku uu ka laabto qorshahiisa uu ku doonayo in hannaanka difaaca gantaalada uu ku rakibo dalka Kuuriyada Koonfureed isla markaana uu hakiyo dhoolatuska milatari ee uu ka sameynayo meel u dhow Kuuriyada Woqooyi.
The post Maraykanka : “Awood baan u adeegsan doonaa arrinta Kuuriyada Waqooyi” appeared first on Ilwareed Online.
DAAWO: MUNAASABADII MAALMAHA XORIYADA SOOMAALIYA 1 JULY, 2017 EE MINNESOTA
Wasaaradda Amniga oo Amaro cusub soo saartay…